सपनामा प्रेम | Kishor Paudel
Home कथा सपनामा प्रेम
Posted By: Kishoron: July 15, 2016 In: कथाNo Comments
…………………………साझँको समय । अफिसमा थिए । ड्युटी सुरु हुन केहि बेर बाकी थियो । गर्मीको समय अझ मधेसमा त साह्रै पो हुन्छ । शितल हावा खान अनि फ्रेस हुन अफिसको अगाडी पट्टीको बरन्डामा बसिरहेको थिए । सडकमा मान्छेहरुको भिड, गाडीको अवाज, धुलो धुवाँ अनि त्यहि दृष्यमा रमाउदै म ।
किशोर पौडेल बाबा ले राखिदिनु भएको रे यो नाम तर अफिसमा सबैले राजा भनेर चिन्ने गर्थे । खुसि लाग्थ्यो साथिहरुको साथ अनि माया देखेर । माया गर्ने अब अरु को पो बाकी थियो र ती साथी हरु बाहेक ।
एकोहोरो टोलाईरहेको रहेछु । मिराको आवाज सुनेपछि झस्कीए । हासो मजाक चल्यो एकैछिन । मोबाईलमा रिङ बज्यो । हामी दुबैको रिङटोन एउटै भएकाले झुक्कीयौ एकैछिन । मेरो फोन आएको रै छ । म फोनमा व्यस्त हुन थाले । हाम्रो अफिस अगाडी एउटा फेन्सी एण्ड कस्मेटिक पसल थियो । मिराको राम्रो चिनजान रहेछ । चर्को चर्को अवाज मा टाढै बाट कुरा गर्न थाले तिनिहरु । तिनिहरुको चर्को आवाजले मलाई समस्या परी रहेको थियो फोनमा कुरा गर्नको लागी । मिरा लाई गाली गर्न थाले ।
म ः बिस्तारै कुरा गर्न सकदैनौ ?
मिरा ः डिस्टब भए भित्र गएर कुरा गर्नु ।
मः तिमी त्यही गएर कुरा गर न । …. कटुवाल ।
यस्तै यस्तै । सानो सानो कुरामा पनि झगडा हुने गर्थो हाम्रो । ईगो थिएन कि आत्मीएता । हाँसी हाँसी कुरा गरीरहेका थिए । मेरो पनि अरु के काम नै थियो र सुनेर बस्नु बाहेक ।
साच्चै भन्ने हो भने म बरन्डामा गएर बस्नु को कारण नै त्यही फेन्सी वाली थिई । साझो तरीकाले भन्नु पर्दा लाईन हान्थे । अनाडी एकोहोरो प्रेम नाम धरी थाहा थिएन मलाई उस्को । मिरा लाई सोध्न पनि अड लाग्दथ्यो मेरो पागलपना थाहा पाउछन की भनेर । फेरी यस्ता कुराहरु अफिसमा लिग भयो भने साथीहरुले उडाएर चरा बनाईदिन्थे ।
आफ्नै दुनियाँमा हराईरहेको रहेछु । अर्थात टोलाएको थिए । खै के भएको थियो मलाई । लबेरीया भयो रे साथीहरु जिस्काउथे । मिराले धक्का दिए पछि मज्जाले झस्कीय । सबितालाई बोलाएको छु – मिराले भनिन । बल्ल थाहा पाए उसको नाम सबिता भनेर । मलाई एकातिर खुसी पनि लाग्यो अनि लाज पनि । साच्चै भन्ने हो भने नचिनेको मान्छे को अगाडी पर्न अझ केटीको साह्रै लाज लाग्दथ्यो मलाई ।
मिरा ः लाईन हान्ने होईन नी फेरी, मेरो साथी हुन
म ः माछा आफै जालमा पर्न आएपछि म कसरी छोडम ह ?
मिरा ः कती चाहिन्छ र हो गलफ्रेन्ड पनि ?
म ः गलफ्रेन्ड बनाउने भनेको बिहे अगाडी हो म्याडम । बिहे पछि त नाकमा डारी बाध्छन रे केटीहरुले ।
मिरा ः हा हा हा हा हा
म ः जिस्काएको मलाई ।
यस्तै चल्दै थियो । फेन्सी वाली सबिता पनि आईपुगी । अनि हामी तिन जना रिसेप्सन रुममा गएर कुरा गर्न थाल्यौ । कुरामा मस्त थिए सबिता र मिरा अनि म चाहीँ तिनिहरुको दर्शक बराबर । सबिता यहाँको नयाँ मान्छे रैछ । सानीमाको घर आएको रे । नयाँ साथी रै छन तिनिहरु पनि । केहि दिन अगाडी मात्रै परिचय भएको रे । हे भगवान धन्न बिहे भको चै रैनछ म खुसी हुन थाले ।
केटीहरुका कुरा न हुन । लिपस्टिक कुन ब्रान्डको लगाउनुहुन्छ ? कुन पाउडर प्रयागे गर्नु हुन्छ ? म त्यती बेला सम्म चुप थिए मात्र तिनिहरुको कुरा सुनेर बसीरहेको थिए । मलाई झ्याउ लाग्यो अनि भने ः
म ः के कुरा गरेको होला ? छ्या ।
मिरा ः हाम्रो कुरा नपचे नपचे कान बन्द गरेर बसे भो नी ।
सबिता ः हि हि हि हि ।
अक्क न बक्क भए म । केहि बोल्नै सकिन । चुप लागेर बस्नु बाहेक कुनै बिकल्प थिएन मेरो । हामी संग त खुब बकबक गर्ने मान्छे चाहीँ अहिले किन चुप हँ ? परिचय गर्नु, कुरा गर्नु न मेरो साथी संग पनि । आदेश थियो मेरो लागी मिराको । म मुसुमुसु हाँसे मात्र ।
मेरो नाम सबिता मैनाली, घर नवलपरासी, सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पसमा पढ्छु ।
मैले बिचमै बोलीदिए ः सि.पि मैनालीको छोरी हो कया ?
हाँसो मच्चीयो एकैछिन । किशोर पौडेल, घर यहि नजिकै हो । मैले भने ः
सबिता ः कता नजिकै ? बाटो मा हो क्या ?
मिरा ः हा हा हा हा
म ः होईन, यही बसन्तपुर मा भन्या के ।
सबिता ः उमम् । मजाक गरेको होई फेरी ।
मिरा ः बाटो मा पनि घर नबनाएको होईन के रे ।
हाँसो मच्चियो । कहाँ पोल खोलीदिने हो भन्ने डर लाग्या थियो । धन्न त्यस्तो केहि पनि भएन । तपाईले लोक गितको कार्यक्रम चलाउनु हुदो रै छ है ? मिरा तर्फ ईङगित गर्दै सबिताको मुख बाट आवाज आयो ।
मिरा ः उमम् हो चलाउछु ।
सबिता ः तपाई को आवाज त फरक आउदो रै छ नि । रेडियोमा सुन्दा र प्रत्यक्ष सुन्दा ।
मिरा ः हो र ? कस्तो आउँछ र रेडियो मा ?
सबिता ः दामी । म त तपाईको आवाजको फ्यान ।
म ः अब कसै कसैको नाक बढेर थाम्नै नसकिने भो । मिरा लाई जिस्काए ।
सबिता ः कहाँ सम्म सुनिन्छ र यो रेडियो ?
म ः धेरै त सुनिदैन , यहि माडी अनि नवलपरासि को कुनै कुनै ठाउँ अनि पाल्पा तिर पनि सुनिन्छ ।
सबिता ः हो र । अहिले सम्म रेडियो सुन्ने बानी छैन । अब घर जादाँ सुन्नु पर्ला मिरा जी को कार्यक्रम ।
आज तपाईको कार्यक्रम मा मेरो बैनी ले म्यासेज गरेकी थिई नी । मिरा तर्फ ईङगित गर्दै सबिता ले भनी ः
मिरा ः नाम के हो र बैनी को ?
सबिता ः आस्मा के.सी
हामी झस्कीयौ । आखाँ जुध्यो मिरा को र मेरो । पसिना छुट्न थाल्यो मेरो । छाङ बाट खसे जस्ते आभास हुन थाल्यो मलाई । एक्कासी रिङगाटा लागेजस्तो भो । आफ्नै मान्छेलार्ई पनि चिन्न नसक्ने म । जाबो एउटा सानो दुर्धटना को खबर सुनेर बिश्वास गर्ने म । त्यो बेला सो खबर सुन्दा अचेत भएको थिए म । बिस्वास पनि कसरी नगरौ आस्माले रुदै दिदी ले हामीलाई छोडेर जानु भयो भिनाजु भनेको कुरा । आखाँ बाट बरर् आसुँ झरीरहेको थियो मेरो । अनि भने ः–
म ः भरतपुर कटहर चोक मा बस्ने कोई किशोर पौडेल लाई चिन्नु हुन्छ? सबितालाई ईङगित गर्दै भने ।
सबिता ः नाइ चिन्दीन मैले कटहर चोक तिर कसैलाई नी ।
म ः शहिद चोक को सगुन ओभरसिज मा काम गर्ने के ?
सबिता ः नाई चिन्दीन मैले ।
म ः आज भन्दा चार बर्ष अगाडी को कुरा हो के यो । ९८१९८५५७६८ यो नम्बर याद छ ?
सबिता ः नाई कस्को नम्बर हो र यो ?
कुनै हालत मा पनि चिनाउन सफल भएको थिईन म । या उ मेरी सबिता होईन वा मैले चिनाउन सकिन कुन्नी । मेरो आखाँबाट आुसँ बगीरहेको थियो , मिरा स्तब्ध थिईन भने सबिताको ओठमा मुसुमुसु हासो । म केहि बोल्न सकिन चुप बसिरहेँ । केहि समय सुनसान र¥यो, कसैको मुख बाट पनि आवाज आउन सकेको थिएन ।
केहि समयको स्तब्धता पछि सबिताको मुख बाट आवाज आयो ः–
म कसै जस्तो ढुङगाको मुटु भएको मान्छे होइन । आखाँ भरी आसु थियो सबिताको । ओए मुर्ख, के चिन्दीन जस्तो लाग्यो मैले ह ? मान्छे को त कुरा छोड्नु छायाँ देखेर पनि चिन्छु तपाईको पागल । माया गरेकी थिए मैले तपाईले जस्तो नाटक होईन बुझनु भो ।
सबिता रुन थाली ………………